अचानक पुन्य गौतम बि रामी “आख खोल्न भएन,टाउको फु,ट्ला जस्तो,घाटी दु,खेको,ज्वोरो १०३ छ” भन्दै ल,डे (भिडियो सहित)
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। समाजिक सन्जाल प्रयोग कर्ता बिच चिरपरिचित नाम हो पुन्य गौतम । उनले हरेक बिषयमा आवाज उठा,उदै आएका छन । कतीपय कुरामा त आ,लोचित समेत हुनु परेको छ तर पनि युटुब फेसबुक र टिकटकमा त उनि भा,इरल नै छन । नयाँ पिढिले एक्सको छम्मा भनेर पनि चिन्छन पुन्य गौतमलाई । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
शनिवार साझ सदाझै उनलाई भेटिने ठाउमा बिरा,मी अव,स्थामा भेटिए । सधै बोल्न त,म्सने पुन्य मलाई गा,ह्रो भो, घाटी दु,ख्यो आखा खोल्न स,किन टा,उको दु,खेर हेरन पनि सकिन,पाइला कहाँ टेक्दै छु थाहा पनि छैन भन्ने अवस्थामा थिए । यसै क्रममा हामीले उनको नजिकको साथी तिकल कार्की लाई बोलाएर घर पठाएउ । हेरौ उनको अवस्था भिडियोमा!
यो पनि पाढनु होसः पुन्य गौतम बने नयाँ मन्त्री, तामाझाम र स्कटिङ सहित मन्त्रालय प्रवेश! समाजमा घ’टेका हरेक घ’ट’नाका बिषयमा टिप्पणी दिदै हिंडेका चर्चित भाईरल ब्यक्ती हुन पुन्य गौतम। हिजो सार्वजनिक भएको एक भिडियो मा उनी मन्त्री बनेका छन। उनी मन्त्रिको सपथ खाएर निकै ताम्झाम स हित निकै क’डा सुरक्षा बिच मन्त्रालय प्रवेश गरेका छन। उनी आफुलाई पिएच्डी स्कलार समेत आफुलाई मान्छन। यसरी पुन्य गौतम एक्कासी मन्त्री बनेपाछी सबैतिर चर्चाको बि शय बनेको छ।
पछिल्लो समय चर्चामा आयका पुण्य गौतमले आज अर्को ठूलो निर्णय गरेका छन,राजनीतिक विश्लेषक विभिन्न घ’ट’नालाइ फरक ढङ्गले केलाउने पुण्यले ।यदि भबिस्यमा राजनितीमा आफू गए भने र कुनै पद पाएको ‘सरकारि भत्ता र गाडी प्रयोग नगर्ने’ घो”ष’णा गरेका छन ।उनले फेसबुकमा यस्तो लेखे:-मेरो आर्थिक अबस्था ठिक छ,। सादा जीवन उच्च बिचार अपनाएकोले मेरो बाईक छैन भबिस्यमा राजकीय पदमा पुगेमातलब भत्ता लिन्न सरकारी गाडी चढ्दिन ।
उता भारतीय सुरक्षाकर्मी SSB ले तुइनको डो’री क़ा”टे’र तपाइ हाम्रै भाई नदीमा बे”प”’त्ता छ; त्यो सम्बन्धी कुनै समाचार छैन, संजालमा च’र्चा प’रि’च’र्चा छैन। तर जा’बो हे’ल्मे’ट लगायन भनेर सबै पत्रकार,मिडिया,सामाजिक सन्जाल पारसको फोटो सहितको समाचार छपा’ऊ’नुको उद्देश्य चाहि के हो? हेलमेट नल’गा’उनु ठु’लो अ’प’रा’ध हो कि तु’ई’न’को डो’रि’ का’टेर मा”न्छे’ बे’प”त्ता बनाउनु ठुलो अ’प’रा’ध हो ?